Ọkà Okwu Nnukwu Okwu Innovation | Ọkà Okwu Okwu Okwu | NextMapping
Cheryl Cran - Ọkachamara Ọkachamara Ọdịnihu
Detuo Cheryl Ugbu a
Ndo, mana odi ka odi ihe nchọgharị gi adighi akwado vidiyo HTML5.
Ọdịnihu nke Ọrụ Okwu Isi Okwu
Cheryl Cran bụ ọkà okwu isi okwu ụwa nke akpọrọ aha dịka # 1 n'ọdịnihu nke nrụgide ọrụ. Ndị ahịa ya na-akọwa ya dị ka 'onye kachasị mma' n'inye ọnọdụ na azịza maka ọdịnihu na-agbanwe ngwa ngwa n'ụdị nnyefe okwu isi okwu na mmekọrịta mmekọrịta.
Dịka otu n'ime ndị na - ekwu okwu mmeghe ụmụ nwanyị kachasị ike, Cran na - enye ndị isi na otu otu ezigbo uru, site n'inyere ha aka ịgbanwe echiche ha site na akara gaa n'ichepụta ihe ma kwalite ọhụụ maka onwe ha na ụlọ ọrụ ha.
Czọ Cran dị ka ihe ọhụrụ, onye ndu na okike isi okwu isi okwu gụnyere ịnakọta data ndị na-ege ntị, yana ijikọ data n'ime isi okwu ahaziri iche yana mmekọrịta oge n'oge isi okwu.
N'okpuru ebe a bụ nhọrọ ikwu okwu nke Cheryl na-enye ndị ahịa n'ụwa niile - a na-ahazi isi okwu ọ bụla ma ọ nwere ike ikpokọta ihe nke isi okwu ọ bụla iji mepụta ngosi pụrụ iche maka mmemme gị.
Ihe omuma ndi ozo maka ndi n’eto nzuko
Ndu Mgbanwe N’ime Ọdi n’ihu post - Otu A Ga - esi Eme Ọgbaghara Ndị Mmadụ na Ezigbo WFH
Ọrịa ọjọọ a emeela ka ọdịnihu nke ọrụ dị ka ọrụ ịba ụba site na ndị ọrụ ụlọ na ihe ịma aka ndị na-abịa na ọrụ dịpụrụ adịpụ.
"Ihe Cheryl banyere ịchọ ịghọta na ịchọta ihe jikọrọ ya na ihe ndị na - agbagha anyị, kama ịghaghachi azụ na ịgbalị ịlụso ihe ndị ahụ ọgụ, bara uru na oge maka ụlọ ọrụ anyị."
Attendee Nzukọ Kwa Afọ
Anya Bank Association of America
Ating na-agagharị ihe na-esote na Post Covid-19 Reality
Onweghi onye buru amụma na ọrịa na-efe efe zuru ụwa ọnụ na 2020 ga-akwado ụzọ niile anyị si arụ ọrụ na ibi ndụ.
"Enwere m obi ụtọ na sọftụwia ahụ kwuru okwu m ji ama ama - ọ nwere ike bụrụ ahụmịhe kachasị mma nke m hụrụla (na ọ kacha nso ahụmịhe nke mmadụ)."
Na-eduga Ndị Otu Virtual Na Ọrụ Na-agbanwe Ọsọ
N'afọ 2020 ụlọ ọrụ agbaala ngwa ngwa ma dozie nnukwu nsogbu nke oria ojoo a
"Nnọkọ ha na Cheryl nwere ume ma na-akpali akpali. Ntụgharịaka ọhụrụ na ọgụgụ isi ga - enyere ndị otu aka aka, ọ bụrụ na ha ejighi ụdị ndị ahụ, nwee ihe ịga nke ọma na ụlọ otu."
Ọdịnihu Dị Ugbu A
Etu esi arụ ọrụ ebe a iji nọrọ na ihe ị ga-eme ka ọ gazie nke ọma n’ọdịnihu
“N’ezie anyị nwere ike ikwu n'eziokwu okwu Cheryl nwere ndị na - ege ntị kachasị nwere ike ọ bụrụla na akụkọ ntolite nke afọ 50 nke ịme ihe omume a.
Site na iji ederede na ajụjụ ndị mmadụ na-eme, a na-eme ka ndị na-ege ntị nwee mmetụta dị ka akụkụ nke mkparịta ụka ahụ - ọ bụghị ihe dị mfe!
Cherzọ mkpịsị ugodi Cheryl bụ ihe okike ma gosipụta ihe ọ na-ekwu maka 'ndị isi na-achị achị'. "
"Cheryl Cran bụ onye kwuru okwu maka mmemme idu ndú anyị na-eme kwa afọ yana n'okwu pụtara ọhụụ. Echiche pụrụ iche Cheryl maka ọdịnihu ọrụ yana ihe achọrọ ka ụlọ ọrụ bụrụ ndị isi butere uru dị ukwuu maka ndị otu anyị. Ndị isi anyị tụkwasara obi abụọ nke ụdị nnyefe Cheryl nke dị ọsọ ọsọ, dọọ aka na ike, na ndị ndu anyị nwere obi uto na Cheryl. sonyeere anyị maka nnọkọ mgbede anyị. Ihe m hụrụ nke bara oke uru dịka onye isi ụlọ ọrụ ahụ bụ nyocha ahụ tupu ihe omume ahụ etinyere na isi okwu ya na ntuli aka na ederede oge niile nke nwere ndị isi nke nghọta. naanị kwuo banyere ọdịnihu na ihe omume o nyere anyị n'ezie mgbanwe ngwaọrụ iji mepụta ọkwa nke ịga nke ọma. "
Ọdịnihu nke Ọrụ dị ugbu a - ị dịla njikere?
Kedụ ihe ndị isi na ndị otu ha ga-eme iji na-eme nke ọma taa ma gafere afọ 2030?
Cheryl bụ ihe zuru oke zuru oke maka Nnọkọta Ọchịchị anyị - anyị nwere ndị nwere nghọta dị ukwuu na ndị isi otu nzere na-anya isi na ịnọ n'isi ndị ọrụ, Cheryl gbara ha aka ka ha chee echiche nke ọma karịa iji gbatịa ụzọ okike ha. zụlite atụmatụ ọdịnihu dabere na ihe na-agbanwe ngwa ngwa na ụlọ ọrụ ọrụ ego. Anyị ga-akwado Cheryl Cran ka ọ bụrụ ọdịnihu ọkachamara na ọrụ okwu ya. ”
Thezọ kachasị mma iji mepụta ọdịnihu bụ maapụ ya
Gị na ndị isi gị adịla njikere ma duzie ndị ọzọ n'ọdịnihu?
Cheryl so anyị rụọ ọrụ na njem mbụ obodo anyị. Ngbaghachi azụ ahụ lekwasịrị anya n'isiokwu ndị sara mbara nke ihe okike na mgbanwe onye ndu. Anyị kpọrọ ndị bịaranụ na nloghachi anyị nke bụ ma ndị ahịa nke ma ndị ahịa na mpụga nzukọ anyị. Enwere ike ịhụ amamịghe Cheryl na ihe niile gụnyere ịhazi nhazi ihe omume na mgbe ịlaghachi ehihie na ọkara. N'oge ezumike nka ahụ, Cheryl ji aka ya wee jikọta ọnụ na inyere onye isi ọ bụla aka ịchọta ọdịnihu ha maka onwe ha na azụmahịa ha. ”
Obodo Coral Gables
Ndị otu dị njikere maka ọdịnihu - esi mepụta agile, mmegharị & mmeghari ohuru
Cheryl Cran abụghị Sheryl Crow mana ọ bụ onye ama ama Anyị nwere Cheryl dịka onye na-emechi isi okwu mkparịta ụka maka ọtụtụ mmemme maka ndị otu anyị. Cheryl so anyị rụọ ọrụ ihe karịrị iri na abụọ ebe ọ nyefere ndị isi 6000 ndị otu egwuregwu ndị dị njikere n'ọdịnihu. Ikike ya iji kpaa ozi nke ndị ọzọ na - ekwu okwu, ike ya iji soro ndị otu a ihe ọchị, ihe ọchị, eziokwu na echiche iwe bụ ihe ịtụnanya ma nwekwaa ezigbo ihe dị anyị nso ka ihe omume anyị dị.
Mahadum VP AT&T
Ọdịnihu nke ịdọrọ & idebe talent kachasị mma
95% nke ụlọ ọrụ nyochara kwuru na-elekwasị anya maka ọdịnihu bụ ịchọta na idobe ikike kachasị elu na afọ nke robot, ndị ọrụ dịpụrụ adịpụ na asọmpi na-abawanye.
Otu anyi jiri Cheryl 10 choputa nke 10 dika onye isi okwu anyi. Ọ bụ ya bụ ọkà okwu kachasị ọkwa akara kachasị elu na ogbako anyị. Ofere karịa ihe anyị tụrụ anya! ”
Maazị National Agra Marketing
Nkà nke mgbanwe ochichi - na - ebute mgbanwe n'ime ụwa a enwere nnukwu ọsọ
Anyị na-ebi n'oge mgbanwe ma unu bụ ndị ngagharị!
“Cheryl bụ ọkachamara n'ọbịa na ogbako ndị isi otu afọ anyị - ọ gosipụtara ya na onye ndu mgbanwe na nka. Na ọkwa dị elu anyị hụrụ ụzọ Cheryl, isoro ndị otu na-edu ndú na ụdị o gosipụtara kwekọrọ na ebumnuche anyị maka ogbako. Nsonaazụ nsonaazụ bụ na o mere ka anyị chọkwuo ịmatakwu usoro mgbanwe a na ileba anya nke ọma ka anyị ga-esi kwado ndị isi anyị ka ha nwee mgbanwe na mgbanwe na-aga n'ihu. "
Chọrọ igodo ahaziri iche?
Kporita anyi na ozi banyere otu onye isi okwu nkwuputa ihe okike na nke ohuru, Cheryl Cran nwere ike hazie isi okwu maka ihe omume gi ozo.